Tamin’ny taoana 2014 nanomboka nidina teny amin’ny commune Manjakandriana ny GL
Nantsoiny Mme Marie izahay 20 vavy zahay no mba hifana mahakasika ny ady amin’ny herisetyra . Izaho dia renim-pianakaviana manam-bandy aman-janaka ,08 ny zanako , ary mbola tsy misy andrikitra misahanimiko tamin’ny io toerana fiofanana no nahafahako nanomboka asa fandraharahana miompy sy mamboly, ohatra taloha izahay sahirana tsy misy ohanina satria ny vadiko irery no miasa , dia eny an-dalan ny volakarama dia efa lany trosa dia manana tahiry any amin’nybank,y
Talohan’ny fiofanana dia sahirana dia nohon’ny fiofananana tamin’ny GL dia lasa manana tahiry indray aza. Ny asa fandraharahana no nahatonga ny fiovana. Nisy anjara biriky betsaka tokoa netin’ny GL. Voalohany indrindra tsy mahita asa fandraharahana sy paik’ady raha tsy nanao fiofanana , faharoa ; satria tà hirika fampandehanam-barotra no nahitana lalam-barotra. Eny misy olona manampy tokoa tao amin’ny GL satria izy nanaokatra compte BOA
Afaka mitatam-bola tsara, tsy mijanona amin’ny zavatra iray tsy mahomby fa mitady hirika foana amin’ny zava-baovao. Nisy tety ny akoho tamin’ny 2015 dia manova akoho manatavy sy kiraro friperie amin’ny zao
Niova tokoa ny fifandraisako amin’ny fianakaviana. Lasa milamina tsar any fifandraisana amin’ny fianakaviana, ny zanako lasa lasa mianatra amin’ny priveè , ny iray afaka BACC dia manohy fianarana. Faly ny fianakaviako ary mampirisika azy ireo hanampy ny hezaka bebe kokoa amin’ny fiainanana
Zava-baovao dia misy fandehanana tany Maurice Tamin’ny 2015. Ny GL no nandefa tamin’ny zany.
Ny olana nosendraina dia faharatsiana dia ny fomba namahana izany dia fitanatana asa fandraharahana, manana tanjona mba ho lasa mpandraharahana lehibe bebe amin’ny alalan’ny fitatanam-bola. Ho foana tanteraka anie ny herisetra hatao amin’ny vehivavy eny ambanivohitra